Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Tphni kun yoomessa keessatti taphatamu, adeemsaafi seera ittiin taphatamuus niqaba. Namni mo’ame tokkos haala dabareesaaa eeggatee itti taphatu niqaba. Haalumakanaan faayidaan inni jireenya dhala namaa keessatti qabu olaanaadha.
Taphni saddeeqaa yoomessa mataasaa keessatti taphatamu niqaba. Yeroo mara taphni kun dhakaarraatti sa’a guyyaa tapha taphatamudha. Dabalataanis, ijoollonni yeroo hedduu horii tikaafi qarree lafa boolli saddeeqaa jirutti taphatu. Kunis, hojii garee yookaan lama ta’anii taphatamudha. Gosa isaa irratti hundaa’uun gola tokko keessa saddeeqni sadiis afuris namu’uu danda’a. Yeroo baay’ee erga facaasaan midhaanii dhumee yeroo boqonnaa tapha taphatamudhas. Yeroo taphataa turan sana keessatti taphattoonni kan irra caalaa raawwatan jecha caalaa gochaanidha. Jechatti kan fayyadaman yeroo yaadaan wal morman qofadha.
Taphni saddeeqaa adeemsa ittiin taphatamu qaba. Tapha kana keessattii jalqaba saddeeqa afur afur boolla sadeeqqatti naqatu. Itti fufuun gosa tapha taphatanii inni tokko gaafata. Inni faallaan immoo dhalaa jedhee deebisaaf. Sana booda inni jalqaba taphicha eegale boolla saddeeqaa isa duubaan dhumarra jiru keessaa sadeeqa hammaaruun irra firfirsuu eegala. Bakka irratti fixe keessaa hammaarrachaa irra firfirsuun hanga naanna’ee gola qullaa irra ga’utti taphatee boolla qulla irra yommaa ga’u dhaabata. Sana booda inni karaa faallaa isaa taa’ee jiru gola isa dhumaa keessaa hammarratee irra firfirsuu eegala. Sana booda adeemsa gola gola isaanii keessaa yommuu boolli takkaa keessaa hammaaramee deebi’ee afur ta’e fuffudhachaa taphatanii dhumarratti hanga golli isa tokkoo qullaa hafuutti taphatama. Ittuma fufuun, dhuma irratti saddeeqa nyaatan sana boolla boolla isaaniitti naqatani inni tokko gola isa tokkoo keessaa lama kessa seenee naqatee sararaan daangaa gidduu buusa. Itti fufuun inni jalqaba lammata irratti taphate isa kana keessatti immoo baraarii’ (dura bu’aa) ta’ee taphachuu eegala. Haaluma duraan itti fufanii taphicha otoo taphatanii inni tokko gola isa tokkoo keessaa boolla saddeeqa sadii qabu irratti waan fixuuf arfaffaa irra buusee jalaa fudhata. Marsaa sadaffaa irratti immoo boolla hunda irraa waanfudhateef taphichi xumurama.
Tapha saddeeqaa keessatti namni mo’atamee taphni haaraan akkaataa inni itti fufuu qabu jira. Tapha saddeeqaa kana keessatti taphnoonni gareen tokko yoo mo’ame, isa bira taa’ee dabaree eeggatuuf gadhiise ba’a. Isaan kunis gola saddeeqaatti sadeeqa naqatanii caqii taphanna waaliin jechuun eegalu. Inni jalqaba eegale kan isaa keessaa gara gidduutii gola tokko kessaa saddeeqa tokko fuudhee gola isa itti aanu keessaa fuudhee isa itti aanu keessa buusa. Haaluma kanaan, hanga naanna’ee bakka irraa eegale ga’utti itti fufa. Yeroo gola irraa eegale bira ga’u sadeeqa hunda hammaaree itti fufee firfirsa. Tapha kana keessatti yeroo irra firfirsu kan isa faalla isaa keessatti gola sadeeqa lama qabaatee sadaffaa irratti yoo xumure caq’ godheera jedha. Sana booda, golli sun kan namichaati keessatti kuufamaafi. Gareen faalla isaa yoo irratti xumure saddeeqa lama qofa irraa fudhatee gola kan isaa keessaa hammaree irra firfirsa. Haaluma kanaan taphichi itti fufee tapha jalqabaa keessatti inni tokko mana lama qofa hambisaafi. Tapha sadaffaa keessatti immoo ‘dilbii’ taphanna jechuun eegalu. Tapha kana keessatti immoo taphicha keessatti gola isaa keessatti yoo xumure gola isa faallaa isaa keessaa kallachaan toora isa keessatti xumuree keessaa fudhachuun kan nyaatanidha. Yoo kan faallaa isaa keessatti xumure ‘irra bule’ jedhamuu nidanda’a. Mo’ichi isaanii baay’ina gola wal irraa fudhataniitiin murtaa’a.
Taphni saddeeqaa kun faayidaa hedduu dhala namaa gonfachiisa. Inni jalqabaa, ciminaan fageessaanii yaaduu, xiinxaluunfi fagootti tilmaamuun bira ga’uu nama gonfachiisa. Kanaafuu, taphni kun bashannansiisuu cinaatti aadaa hawaasaa, lakkoofsa, tartiibaafi seera barsiisuun dandeettii yaaduufi fagootti xiinxaluufi tilmaamuu akka dagaagfatan taasisa. Dabalataanis, tapha kana keessatti ijoollonni yaadanii eessatti akka xumuran fagootti tilmaamuun waan taphataniif dandeettii xiinxallii isaanii daran dagaagsuu danda’a. Kunis, dorrobaa faalla isaa dhalshiifachuu, rimeessa gurguruu danda’uu qaba jedhamaan. Akkasumas, haala itti dilbii isaa nyaachuu danda’u tilmaamuun fageesseeti yaada. Darbees bakka inni irraa hincorannetti caq godhachuu danda’uu qaba Ademsi kunneenis walitti qabaatti dandeettii bilchina sammuu daran gabbisu jechuun nidanda’ama.
Walumaagalatti, taphni aadaa tapha aadaa ijoolleetiin taphatamudha. Tapha yoomessa mataasaa danda’e keessatti taphatamudha. Adeemsaafi seera mataasaatis niqaba. Tapha kana keessatti namni injifatame haala inni itti marsaasaa eegee taphicha itti fufuu danda’u nijira. Taphni kun faayidaa guddaa dhala namaatiif waan qabuuf kunuunfamee labata aanuuf olkaa’amuu qaba.